Nisy moa ny fanambaran’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alakamisy teo fa ny depiote no mitantana ny “operation Tsinjo” ary tsy ankanavaka io depiote miara-dia amin’ny fitondrana io na tsia. Ny antony voalohany dia efa ireo Depiote miara-dia amin'ny fitondrana no nandray an-tanana avy hatrany ny fikarakarana izany, hoy depiote Hanitra Razafimanantsoa. Hita anefa fa misy endrika fanavakavana isan-karazany ao anatin'ny fitsirihana izay tokony hisitraka ireny fanampiana ireny ka mety hitarika fisaraham-bazana. Tsy te ho tompon’andraikitra amin'izany ireo solombavambahoaka avy amin'ny Tiako I Madagasikara ka nanapa-kevitra nisitaka avy hatrany, hoy ny fanambarana. Faharoa dia mahatsapa fifanitsahan'andraikitra ny Depiote TIM satria asan'ny mpanatanteraka manontolo ny momba ireny fanampiana ireny. Manara-maso ny fomba anatanterahana azy no anjara asan'ny solombavam-bahoaka. Ao anatin'izany ohatra ny momba ny vola sy ny paipaika rehetra nahafahana nanatanteraka azy ireny. Ankoatr'izay dia tokony afaka mijoro mpanelanelana eo amin'ny vahoaka sy ny mpanatanteraka foana ny solombavam-bahoaka. Tsapanay Depiote TIM fa sarotra ny hiantsoroka izany adidy izany raha vao mitsabaka amin'ny andraikitrin'ny mpanantanteraka izahay. Hamafisina arak'izany fa tsy tompon’andraikitra amin'izay fizarana zavatra avy amin'ny fitondrana ireo solombavam-bahoaka TIM, hoy izy ireo.